वास्तुशास्त्रका अनुसार शयन बक्ष कुन दिशामा र कस्तो बनाउने ? एक चोटी अवस्य पढ्नुहोला – Tungoon
वास्तुशास्त्रका अनुसार शयन बक्ष कुन दिशामा र कस्तो बनाउने ? एक चोटी अवस्य पढ्नुहोला
यस लेखमा वास्तु शास्त्र अनुसार बनेको घरको कुन भाग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको बिस्तृत जानकारी दिईएको छ। वास्तुको अर्थ हुन्छ आवासगृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश।यसर्थ, “वास्तु शास्त्र” भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तु शास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरुप मान्न सकिन्छ। हिन्दु धर्म अनुसार वास्तु शास्त्रको पालन गरी बनाइएको घरमा बस्दा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हुन्छ। आाज हामि शयन कक्ष कुन दिशामा बनाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न गैरहेका छौ ।
१.शयन कक्ष अर्थात सुत्ने कोठा वास्तु शास्त्र अनुसार बनेको हुनुपर्दछ। यसो नभएमा राती सपना नराम्रो देखिने गरिन्छ।सयन कक्ष निर्माणमा निम्न कुराहरु ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
२.मुख्य शयन कक्ष दक्षिण भागमा बनाउनु राम्रो हुन्छ
३.पलंग स्थापना सुत्नेको शीर दक्षिण तर्फ हुने गरी गर्नुपर्छ
४.शयन कक्ष वर्गाकार हुनु राम्रो मानिन्छ भने कक्ष अनियमित आकारको हुनुहुदैन
५.शयन कक्षमा पूजास्थल राख्नुहुदैन
६.पलंगको अगाडी पट्टि ऐना राख्नुहुदैन
७.शयन कक्षमा राम्रा तस्बिर, फूलहरु र चित्रहरु राख्नु उचित हुन्छ
८.वास्तु शास्त्र अनुसार शयन कक्षमा एक्वैरियम हुनु राम्रो होइन